မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 442
Ashin Gambira – အရှင်ဂန္ဘီရကို အာဏာပိုင်များက ကျောင်းသို့ ပြန်ပို့
အရှင်ဂန္ဘီရကို အာဏာပိုင်များက ကျောင်းသို့ ပြန်ပို့ ဒီမိုဝေယံသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ လယ်တီဝိပဿနာကျောင်းမှာ ခေတ္တသီတင်းသုံး နေထိုင်နေတဲ့ ရွှေဝါရောင်ဦးဆောင်ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရအား ယနေ့မနက်ပိုင်းက အာဏာပိုင်များမှ ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ပြီး ယနေ့ည ၈နာရီခွဲအချိန်က ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်နဲ့ ပြန်လည် သီတင်းသုံးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အရှင်ဂန္ဘီရ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိမီ၊ ထိုနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ချိတ်ပိတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ကျောင်းတိုက်လေးခုအနက်မှ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်၊ ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်တို့အား သာသနာရေးဦးစီးဋ္ဌာနနဲ့ အာဏာပိုင်များက ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ပေးလိုက်သည်။ သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းတိုက်နဲ့ ရတနာဂုဏ်ရည် ကျောင်းတိုက်တို့အား ချိတ်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
Kachin News – ကချင်ပြည်နယ်အခြေအနေ အမေရိကန်တွင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ ရှင်းပြ
ကချင်ပြည်နယ်အခြေအနေ အမေရိကန်တွင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ ရှင်းပြ သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10 ရက် 2012 ခုနှစ် ကချင်သတင်းဌာန အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော NDF ပါတီ၏ ကချင်ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စဟီလာရီကလင်တန်နှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က ၀ါရှိန်တန်ဒီစီတွင်တွေ့ဆုံ ခဲ့စဉ် လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြည်တွင်းစစ်နှင့် အခြား အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုမေးကြတယ်။ အခုလောလောဆယ် မြန်မာအစိုးရ ကို ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကို မေးတယ်။ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတယ်ဆိုပေမဲ့ နေပြည်တော်နှင့် မြို့ကြီးရန်ကုန် လောက်ပဲ။ ထူးထူးခြားမရှိဘူး။ တိုင်းရင်းသားဒေသများ မပြောင်းလဲသရွေ့တော့ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတယ် ဆိုပြီးပြောနေတာက အလကားပြောနေတာပဲ။” ဟု ဖြေဆိုခဲ့သည်ကို ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။လက်ရှိ...
မြန်မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးလက်ရှိအခြေအနေ
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ● နိဒါန်း အာစီယံ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ သည် ယခုခေတ်ကျမှသာ စီးပွားရေးပါ၊ ပူးပေါင်းမှဖြစ်တော့မည်ဟု ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်လာကြသည်။ အဓိကမှာ တရုတ်၏ တဟုန်ထိုးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် အမေရိကန်၏အကျိုးစီးပွားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ယိုးဒယားဟု ခေါ်ကြသည်။ ထိုင်းလူမျိုးတို့က သူတို့နိုင်ငံက ဆိုင်ယမ် Siam ဟုခေါ်ကြသည်။ မြန်မာကို Burma ဘားမားဟု ခေါ်ကြသော်လည်း မြန်မာတို့က Myanmar ဟု မိမိအသံထွက်အတိုင်း ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကြသည်။ ၁၂၃၈ ခုနှစ်မှ ထိုင်းလူမျိုး များက မူလအုပ်စိုးသူ ခမာများကို အနိုင်ယူပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာများက ပိုစောသည်။ ၁၀၄၄ တွင် မူလနေထိုင်သူ၊ ပျူနှင့် မွန်များကိုအနိုင်ယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံ (ပုဂံမင်းဆက်) ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။...
Exiles welcome in Burma – ပြည်တော်ပြန်များ နိုင်ငံသားပြန်လည်ခံယူခွင့်ရှိဟု အစုိုးရကပြော
ပြည်တော်ပြန်များ နိုင်ငံသားပြန်လည်ခံယူခွင့်ရှိဟု အစုိုးရကပြော မိုးမခ၊ မော်ဒန်ဂျာနယ်၊ သတင်းကောက်နုတ်ချက်။ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းမတုိုင်မီမှာ ပြည်ပက မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ ပညာရှင်ဆိုသူများက ပြည်တွင်းသို့ မိမိတို့ အစီအစဉ်အသီးသီးနဲ့ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းနောက် ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းမှာတော့ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ့မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ ကလည်း အသီးသီး ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယခုလို ပြည်တော်ပြန်သူ အများအပြားက မြန်မာပြည်တွင်းမှာ မိမိတို့ အရေးကိစ္စများ ပြန်လည် အခြေချခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်လာကြချိန်မှာ လက်ရှိအစုိုးရကလည်း ပြည်တော်ပြန်များ ပြန်လည်အခြေချနေထုိုင်ခွင့်ကို စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ပြည်ပကနေ ပြန်ဝင်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲက သိရပါတယ်။...
Ashin Gambira – ရွှေဝါရောင်သံဃာ အရှင်ဂမ္ဘီရကို အာဏာပိုင်များ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း
ရွှေဝါရောင်သံဃာ အရှင်ဂမ္ဘီရကို အာဏာပိုင်များ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့ခင်းက ရန်ကုန်၊ သုမင်္ဂလာရာမ လယ်တီကျောင်းတိုက်မှာ ခေတ္တသီတင်းသုံးနေထိုင်နေတဲ့ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာတပ်ပေါင်းစု ခေါင်းဆောင် အရှင်ဂန္ဘီရကို အစုိုးရအာဏာပိုင်များက လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရှင်ဂန္ဘီရ ဟာ စစ်အစုိးရရဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း ခံရစဉ် ထောင်တွင်းမှာ အာဏာပိုင်များရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုများကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ စစ်အစိုးရက အမည်မသိရတဲ့ ဆေးများ အတင်းအကြပ် တိုက်ကျွေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ မှာ ထောင်က လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး ကောင်းမွန် လုံလောက်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု စစ်ဆေးမှုများ မဆောင်ရွက်နိုင်သေးခင်မှာပဲ အာဏာပိုင်များရဲ့ ထိန်းသိမ်း ခေါ်ဆောင်မှုကို ထပ်မံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာကို ပြိုင်ဘက်တဦး ကန့်ကွက် – U Tin Yee’s statement on Daw Suu
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ကို ကန့်ကွက်သူ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၎င်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်တွင် ၀င်ပြိုင်မယ့် ဦးတင်ရီ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မီးလောင်၊ ဆိုင်ကယ် တထောင်ထက်မနည်း ဆုံးရှုံး – fire on China-Burma border
Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ နေ့ခင်းက မီးလောင်ကျွမ်းနေသော ဂျယ်ဂေါင်မြို့ ဆိုင်ကယ်ဂိုဒေါင်တန်း ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်က တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် ဂျယ်ဂေါင်မြို့ရှိ ဆိုင်ကယ်ဂိုဒေါင်တန်းတွင် ၀ါယာရှော့ဖြစ်ရာမှ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ်ဂိုဒေါင် ၄၄ လုံး ဆိုင်ခန်းအားဖြင့် ၈ ခန်း လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့သည်။ ယင်းဆိုင်ခန်း ၄ ခန်းတွင် ဆိုင်ကယ်အစီးရေ ၁ ထောင်ကျော် လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
Clinton met with Burmese activists – ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ ကလင်တန်နှင့်တွေ့ဆုံ
မြန်မာပြည်က ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ ကလင်တန်နှင့်တွေ့ဆုံ ကိုဇာဂနာက ခင်ညွန့်နဲ့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရေတောင် မတိုက်ဟု အင်တာဗျူးတခုတွင် ပြော မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ နေ့ခင်း၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ အစုိုးရရုံးတော်တွင် မြန်မာပြည်က ခေတ္တလာရောက်သူ နိုင်ငံအရေး နိုးကြားလှုပ်ရှားသူများဖြစ်သည် ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ကို အစုိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟယ်လရီကလင်တန်က လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို တွေ့ရစဉ်။ http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/07/no_joke?page=0,0 ( ဖော်ရိန်းပေါ်လစီအမည်ရ စာစောင်တွင် ပါသော အင်တာဗျူး) အထက်ပါ စာစောင်၏ အင်တာဗျုးတွင် ကိုဇာဂနာက မိမိနှင့် မကြာသေးမီက လွတ်မြောက်လာသူ စစ်အစုိုးရ၏ ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင် ဗုိုလ်ခင်ညွန့် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ...
တာရာဝေယံ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ မိတ်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပွဲကို ဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြစ်သာရပ်၊ သံသုမာ လမ်းနဲ့ ရတနာလမ်းထောင့် လိုင်စင်ရုံးအနီးက စိတ်တိုင်းကျ စားရိပ်မြုံ ဒုတိယထပ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Magin sayardaw, Ko min Ko naing, Dr. zaw min, U hla shwe Ma zin mar aung ………………. U hla saw Ko took ki & Ko mya aye …… ….Kyaw ko ko & Ko zeya Ko si...
Page 442 of 443«1...439440441442443»
MPT မှ စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက် များကို တနေရာထဲ ရနိုင်သည့် `လိုတရ´ web portal စတင်
ဒီမိုကရက်ပါတီက ညီညွတ်ရေးကို ဦးတည်ပြီ
ဖြိုးသီဟချို၊ ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) - ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်ကို စစ်တပ်၏ ဒုသမ္မတလောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်
တူမောင်ညို - VOA မှ တဆင့် သူတို့ လိမ်ညာနေကြပြီ
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းအကြမ်းဖက်ခံရမှု (၁၈) လပြည့်အထိမ်းအမှတ် မျက်နှာဖုံးစွပ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဇော်အောင် (မုံရွာ) - မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. https://t.co/ke5vmBc3dz https://t.co/vdnBJwHv30 about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – အိမ်တွင်း သတိပဋ္ဌာန် “ပစ္စုပ္ပန်” https://t.co/GZKvBYh5Ro https://t.co/dWdJ4n94K6 about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကျော်ဟုန်း – ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း https://t.co/1pKvxDMJFA https://t.co/Lv6kU1Hn4F about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို အထွက် တိုးစေမည့် စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် https://t.co/fOwvlPT0Fe https://t.co/egJocOUq9l about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite